Shabaab oo sheegay inay la dagaalamayaan ciidamada Kenya |
Shabaab oo sheegay inay la dagaalamayaan ciidamada Kenya
Afmadow (NogobNews) 17/10/2011 Xarakada Al Shabaab ayaa waxa ay sheegtay inay la dagaalameyso ciidamada dowladda Kenya ee soo galay gobolka Jubada hoose ee Soomaaliya, iyadoo ugu baaqday shacabka inay arintaasi ka gacan siiyaan.
Sida uu qoray wargeyska Sunday Nation ee kasoo baxa dalka Ingiriiska Sheekh Xasan Turki oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Xarakada Al Shabaab ayaa waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan ciidamada Kenya oo maanta soo galay gudaha Soomaaliya.
Sheekh Xasan Turki ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay ka laaban doonaan dalka Soomaaliya, iyagoo guul daro la kulmay, waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin la dagaalanka ciidamada Kenya.
“Waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadka Soomaaliyeed ee damiirka leh cadowga kasoo gudbay xadka Soomaaliya inay la dagaalamaan, waxaan ka dalbanaynaa inay garab istaagaan Al Shabaab” sidaa waxaa yiri Sheekh Xasan Turki oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Xarakada Al Shabaab.
Sheekh Xasan Turki ayaa waxa uu sheegay inay ciidamadooda ay ku qasbi doonaan ciidamada Kenya inay ka laabtaan dalka Soomaaliya, waxaana uu intaasi ku daray inay muhiim tahay in loo midoobo la dagaalanka ciidamada Kenya.
Hadalka Xarakada Al Shabaab ayaa waxa uu imaanyaa xili galabta xadka Soomaaliya iyo Kenya ay kasoo gudbeen ciidmada dowladda Kenya kuwaasi oo la sheegay inay baacsanayaan Xarakada Al Shabaab.